प्रचण्ड-माधव पक्षको आन्दोलनमा भारतको झण्डा ? – नेपाली सूर्य
February 10, 2021 Nepali SuryaLeaveaComment on प्रचण्ड-माधव पक्षको आन्दोलनमा भारतको झण्डा ?
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनरत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (प्रचण्ड-माधव पक्ष) ले आज गर्न लागेको शक्ति प्रदर्शनन्तर्गत जुलुस निस्कने क्रम शुरू भएको छ ।
पुल्चोक, त्रिपुरेश्वर, माइतीघर, केशरमहल र जमल गरी उपत्यकाका पाँच ठाउँबाट निस्कने जुलुसको लागि नेता कार्यकर्ता भेला हुँदैछन् । अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ बाहेकका सबै केन्द्रीय नेताले जुलुसको नेतृत्व गर्ने बताइएको छ ।
अहिले सामाजिक सञ्जालमा भारतको झण्डा सहित देखिएको भिडले अनेक शंका उपशंका उव्जाइरहेको छ । यो फोटो कहिलेको भनेर यकिन नभएपनि आजकै भनेर दाबी गरिएको छ । केहिले भने प्रचण्ड-माधव पक्षको आन्दोलनलाई असफल पार्न साईबर सेनाले फेक फोटो बनाएको आशंका पनि गरिरहेका छन् ।
आउने भयो क’डा नियम: महिला विदेश भ्रमणमा जाँदा परिवारको सहमति, वडाको सिफारिस अनिवार्य
February 7, 2021 February 7, 2021 Nepali Surya